Sida loo baadho dhammaan galka Mac kaaga ee iPad-ka Faylasha abka | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo baadho dhammaan galka Mac kaaga ee iPad-ka Faylasha abka
Sida loo baadho dhammaan galka Mac kaaga ee iPad-ka Faylasha abka
Weligaa ma ku fadhiisatay sariirta, ama ma ku fadhiisatay balbalada iPad-kaaga, oo ma xaqiiqsatay in faylka aad u baahan tahay uu yaallo Mac-gaaga? Oo kaliya Mac kaaga - kuma jiraan Dropbox ama iCloud Drive ama kayd kale oo si sahlan loo gaari karo? Waa inaad kacdo, oo aad u socotaa Mac, ka dibna aad ka shaqayso sidii aad faylkaas ugu geli lahayd iPad-kaaga.
Ma aha inay sidan noqoto. Hal app, waxaad ku dhejin kartaa dhammaan galka Mac (ama PC-gaaga) iyo faylalka isla markaaba gudaha iPad-ka Faylasha, diyaarna u ah in la baadho. Aan samayno.
Galalka Mac, ee ku yaal iPadkaaga
App-ka aad u baahan doonto waa FileBrowser ka Stratospherix. Ujeedada FileBrowser waa in lagu xidho wax kasta. Waxaad ku xidhi kartaa Dropbox-kaaga, tusaale ahaan, laakiin sidoo kale waxaad ku xidhi kartaa kaydinta shabakada, darawalada adag ee ku xidhan routerkaaga, ama kombayutarada gurigaaga (ama shaqada).
Maanta waxaan xiisaynaynaa kuwan ugu dambeeya: ku xidhidhiyaha kombayutarka. Si aad tan u sameyso waa inaad awood u yeelataa wadaagga faylka Mac, ka dibna ku xir Mac-ga adigoo isticmaalaya barnaamijka FileBrowser.
Habaynta tan waa sahlan tahay, oo marka aad dhammayso, dhammaan qaab-dhismeedka galka Mac-gaagu waxa uu ka soo muuqan doonaa gudaha iPad-ka Faylasha abka, diyaarna u ah in la baadho, iyo in la koobiyeeyo oo laga soo guuriyo, sida faylalka maxalliga ah.
Talaabada koowaad waa inaad qabsato abka:
FileBrowser – Maareeyaha Dukumentiga
DownloadFileBrowser – Maareeyaha dukumentiga ee App Store (iOS)
Deji Mac-gaaga hal mar iyo weligeed
Hubi faylka wadaaga, ka dibna dhagsii Options…
Tallaabada labaad waa in la awood wadaago Mac-kaaga. Tag Dookhyada Nidaamka> Wadaagista on your Mac, oo calaamadee sanduuqa ku xiga Faylka Wadaagga ee liiska bidixda. Tani Tessa kaaga Mac si aad ula wadaagto faylashaada shabakada Kadib, dhagsii Fursadaha… badhanka, oo hubi Wadaag faylalka iyo galalka adoo isticmaalaya SMB. Markaa, liiska isticmaaleyaasha os, calaamadee sanduuqa ku xiga magacaaga.
Ka dhig sida tan.
Waa kaas. waad dhammaatay Wax badan oo ku saabsan kuwaas, iyo si loo xalliyo dhib kasta, ka eeg boggaga caawinta ee FileBrowser.
Ku xidh FileBrowser Mac kaaga
Tani xitaa way fududahay. Kaliya fur FileBrowser, oo taabo scan badhanka hoose ee tiirka gacanta midig. Haddii wax walba ay wanaagsan yihiin, waa inaad Mac ka soo baxdaa liiska. Taabo Mac, ka dibna raac tallaabooyinka dejinta. Waxa lagu waydiin doona nooca kombayutarka aad ku xidhantahay,kadibna waxa aad galisaa isticmaale-magacaaga iyo furahaga.
Waa kaas! Mac-ga waxa lagu dari doonaa dhinaca dhinaceeda, mustaqbalkana waxa aad si toos ah ugu xidhmi kartaa adigoo taabsiinaya.
Kudar Mac kaaga abka Faylasha
Tani waa meesha aad ku darto FileBrowser app Files.
Talaabada habaynta ugu danbeysa waa in la furo abka Files-ka. FileBrowser waxa uu bixiyaa "bixiye kaydinta," taas oo macnaheedu yahay in ay ka dhigi karto waxa ku jira gudaha abka Files-ka. Si aad u shido, taabo Editxagga sare ee shaashadda, ka dibna u jiid furaha ku xiga FileBrowser ee liiska. Taabo Dhammaad. Hadda, markaad taabato astaanta FileBrowser, waxaad u socon kartaa Mac-gaaga. faylalkeeda iyo faylalkeeda waxay u muuqdaan sida kuwa kale.
Hal shay in la xuso. Muddo ka dib, Mac ayaa hoos u dhigi doona xiriirka. Si aad dib ugu xirto, waa inaad furto barnaamijka FileBrowser. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in fariinta saameyntan ay ka soo muuqato abka Files-ka, marka waa inaad taabataa si aad u furto abka FileBrowser oo aad dib ugu xirto.
Haddii aad tan aragto, kaliya taabo si aad u furto FileBrowser si aad dib ugu xirto.
Tani waa hab adag oo lagu xidho ku dhawaad ​​kaydinta shabakad kasta, waana laba-laab-weyn sababtoo ah saamiyada shabakadaas waxay ka muuqdaan gudaha abka Faylasha asalka ah. Waayo-aragnimadayda, FileBrowser waa maalgashi adag. Had iyo jeer way shaqeysaa, waana xaliye dhab ah marka aad rabto inaad wax ku xidho. Dhab ahaantii, waxaan u isticmaalaa beddelka abka Files-ka marar badan, sababtoo ah waxay bixisaa sifooyin badan oo badan, oo aan ka soo laadlaadin dariiqa kala badh iyada oo loo marayo hawlgalka nuqulka.
27 Tirakoobka Raadinta Google ee ay tahay inaad ogaato sanadka 2019 (Fikrado!)
12-ka Aal ee ugu Sarreysa ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 2019
Loolanka taam ee Apple Watch ee soo socda ayaa u dabaaldegaya Maalinta Caalamiga ah ee Yoga
Ku-soo-noqnoqoshada sheekooyinka Instagram-ka waa bug dhib badan oo la hagaajin doono, ugu dambaynta
Qaar ka mid ah tweaks-ka-jail-jabinta ugu fiican ee iOS 14's Notes app